Kolombia: Nidina an-Dalambe Ny Mpiasa Sy Ny Mpianatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Oktobra 2011 16:11 GMT
Volana Nisiana fifanenjanana tao Kolombia ny oktobra 2011. Nampisy fihetsiketsehana an-dalambe avokoa ny fifidianam-paritra ho avy amin'ny Alahady 30 Oktobra, ny Fifanekena Ara-barotra Malalaka miaraka amin'i Etazonia, ary ny fanavaozana ny rafi-pampianarana ambony.
Tamin'ny 7 Oktobra, niantso fitokonana nanerana ny firenena ny sendikà noho ny mety ho fisiana hitsivolana maromaro tapaka izay mety hanova zavatra betsaka amin'ny fiaimpiainan'ny mpiasam-panjakana.
Ny bolongan'ny Estudiantes de la Universidad de Pereira [es] (“Mpianatry ny Anjerimanontolon'i Pereira”) sy ny vohikala [es] hafa no namoaka fanambarana an-gazety milaza fa lazain'ny sendikàn'ny mpiasa [es] mampisy olona maro ho tsy an'asa ny sasantsasany amin'izany fanovana izany:
Mpiasam-panjakana nanao filaharam-be tao Bogota. Saripika Luis Gómez, copyright Demotix (7/10/2011).
Raha jerena ny fitokonana nasionaly, mino ny mpikarakara ny fitokonana fa ny antony voalohany nahatonga izany dia ny naneken'ny fitondrana avy hatrany ny didy hitsivolana, manova ny hitsivolana 535, nefa tsy nisy fifampiresahana tamin'ny sehatry ny asam-panjakana. Efa nifanarahan'ny governemanta, ny sendikan'ny mpiasa sy ny mpiasam-panjakana ny didy hitsivolana vaovao efa-bolana lasa izay na dia mbola tsy nosoniavin'ny Filoha Santos aza.
Mifandraika amin'ny lalàna hafa napetraky ny fitondrana ny antony hafa nampisy ny fitokonana. Antony iray ny nandavan'ny Comision Nacional del Servicio Civil (Vaomieram-Pirenena Misahana ny Asam-panjakana) hametraka ny Lalàna lanin'ny Antenimiera faha-04 tamin'ity 2011 ity, izay mifantoka amin'ny mpiasa an-tselika mahatratra 120.000; ny antony hafa dia mifandraika amin'ny tsy fahasahiana politika hanafoana ny fampanaovana olona hafa ny asa sahanin'ny Fanjakana; ny antony fahaefatra dia fandrafetana indray ny asam-panjakana, izay araka ny lazain'ny sendikàn'ny mpiasa fa hanafoana asam-panjakana an'arivony.
Daniel Echeverry, avy amin'ny bolongana Cosas que se deben cambiar (“Tsy maintsy miova ny zavatra maro”), manambara fa tsy ny mpiasam-panjakana ihany no nandray anjara tamin'ny fidinana an-dalambe, fa ny mpianatry ny Anjerimanontolo ihany koa [es]. Ankoatra izany, manahy izy fa tsy mahalala ny antony ambadik'itony fihetsiketsehana itony ny olona:
Indrisy, hitantsika fa maro kokoa ny mpitandro ny filaminana mifampiraharaha amin'ny fanjakana noho ny isan'ny mpampianatra, mora mirona amin'ny fifandirana sy ny tabataba ny olona, tsy fantany akory ny takian'ny mpanao fihetsiketsehana sy ny antony mahatonga azy ireo hanao fihetsiketsehana.
Julio Roberto Gomez, mpitarika sendikaly, mametraka fa tsy nanatontosa izay efa nifanarahana hametraka Fifanarahana arak'asa iraisana ho an'ny mpiasam-panjakana 800.000 [es] ny fitondrana. Fifanarahana vonjimaika ihany no ananan'ny sasany amin'ireo mpiasa ireo.
Voafehy ao anaty andininy valo ny antony nahatonga ny fitokonana izay ahitana “Fahasarotana mahazo ny mpiasan'ny fahasalamana na miankina na tsia amin'ny fanjakana sy ny zo hahazo fanabeazana ary ny Anjerimanontolo miankina amin'ny fanjakana” [es].
Momba ity raharaha ity ihany, nanao filaharambe tany amin'ny faritra maro nanerana ny firenena ny mpianatry ny anjerimanontolo tamin'ny 12 Oktobra. Nanatsonga izao lahatsoratra manaraka izao [es] ny bolongana Fosforito ary navoakan'ny mpamham-bolongana hafa ihany koa:
Mandà ny hanomezana ho an'ny tsy miankina ny fampianarana ny mpianatra mihoatra ny 250.000; fanagadrana tsy amin'antony, olona maratra sy mpianatra darohan'ny tafika miafin'ny fanjakana Kolombiana no setrin'izany.
Mbola namoaka fanambarana an-gazety [es] navoakan'ny Mesa Amplia Nacional Estudiantil (“Foibe Nasionalin'ny Mpianatra”) [es] tamin'ny 12 oktobra ihany koa ny bolongana Fosforito:
Ao anatin'ny fanetsiketsehana nasionaly hanoherana ny lalàna 30 sy ny fanitsiana aterany, sy ho fanohanana ny fametrahana modelim-panabeazana iraisana sy mirazotra dia nifanaiky ny mpianatra manerana ny firenena mivondrona ao amin'ny Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE, fa hanao fitokonana faobe sy lavareny mandra-panaisotry ny fitondrana ilay lalàna sy hiantoka fanitsiana demokratika tena izy izay mifanojo amin'ny ilain'ny anjerimanontolo sy ny firenena. Hanomboka amin'ny sasakalin'ny 12 Oktobra amin'ity taona ity ny fitokonana; nahomby ny [fitokonana] tamin'ity andro ity izay nahitana mpandray anjara mihoatra ny 200.000 ahitana mpianatra, mpampianatra sy ray aman-dreny izay nanao fihetsiketsehana nanerana ny firenena Kolombiana.
Ao amin'ny Twitter, hita rehefa mampiasa ny tenifototra #NoReformaLey30 (“Tsia amin'ny fanitsiana ny Lalàna 30) sy #NoLey30 (“Tsia amin'ny Lalàna 30″) ny adihevitra. Manoratra i Juan D. Barreto R (@Jdbarretor) [es]:
Te-hahare ny soso-kevitrareo aho! mitady ny FANOHERANAreo! #NoReformaley30!
Misaotra ireo nisiokantsera tamin'ny fampiasana io tenifototra io i Vida Torres (@LaVidaTorres) [es]:
Mankasitraka anareo tamin'ny fanehoam-pihetsiketsehana an-tserasera niaraka tamin'ny #NoreformaLey30 tao amin'ny riakan-tsehony. Eny amin'ny fanabeazana misy kalitao!!!!
Miresaka momba ny fampindramam-bola atolotra ao amin'ny fanitsiana ny fampianarana ambony i Porfirio Gaia (@idealibertaria)[es]:
5 taona mianatra, 20 taona mandoa vola #NoReformaLey30
Manitrikitrika i Sharito Otero (@Sharito_O_P) [es]:
#NoreformaLey30#NoLey30!! Ho ela velona ny #ParoNacional [Fitokonan'ny Anjerimanontolo Nasionaly]!!
Manamafy i Katherine Galvan [es]:
Hahaha nanontaniana aho androany raha handray diploma, tsy fantatro loatra an, mety ho amin'ny 2089 na 3000, saingy tsy maninona e, ho amin'ny antony tsara ny zava-drehetra #NoLey30
Todo lo que hay (“Ity izany”) namoaka ny lahatsarim-pihetsiketseham-panoherana tao Medellin [es]:
Heverina ho nahomby ny fitokonan'ny mpiasa [es] noho ny hamaroan'ny olona nandray anjara, sady tsy nisy ny olana teo amin'ny fitandroana ny filaminana ary tsy nisy ny fifandonana tamin'ny polisy. Saingy nandritra ny fanoheran'ny mpianatra no nisy fifandonana tamin'ny ESMAD (Vondrona Misahana ny Fifehezana ny Fanakorontanana) arympianatra iray maty nandritra ny fanapoahana baomba ovy tao Cali.
Araho ny tenifototra #Ley30 raha te-hanaraka ny tohin'ny raharaha momba ny fanavaozana ny fampianarana any Kolombia.